warkii.com » Maxaa Ka Oohiyey?? Adam Lallana Oo Ilmada Xajisan Kari Waayey markii La Weydiiyey Saaxiibkiisa Ugu Wanaagsan Liverpool
Maxaa Ka Oohiyey?? Adam Lallana Oo Ilmada Xajisan Kari Waayey markii La Weydiiyey Saaxiibkiisa Ugu Wanaagsan Liverpool
Adam lallana ayaa ilmada xajisan waayey xilli uu bixinayay waraysi ahaa midkii uu ku macasalaamaynayay kooxdiisa Liverpool oo uu ka tegayo xagaagan, kaddib markii uu dhamaaday heshiiskiisii Anfield.
Lix sannadood oo uu joogay Anfield kaddib, waxa uu Lallana shandaddiisa ka xidh-xidhay kooxda toddobaadkan, iyadoo haddaba la fahamsan yahay kooxda uu kusii jeedo oo ah mid isla horyaalka Premier League ka ciyaarta.
Telefishanka kooxda Liverpool ee LFCTV ayaa waraysi sagootin ah uu siiyey 32 jirkani, waxaanay ilmadu kasoo daadatay markii wax laga weydiiyey Jordan Henderson oo ahaa saaxiibka ugu wanaagsan ee uu ku lahaa Liverpool.
Adam Lallana ayaa la weydiiyey magaca saaxiibkiisa ugu wanaagsanaa muddadii uu joogay Liverpool, waxaana markiiba kasoo daatay ilmo uu marba iska masaxayay, waxaana isagoo dagaal kula jira qoyaanka dhabankiisa ee uu qalajinayay uu ku jawaabay: “Jordan lamaan joogin safakaygii oo dhan. Waxa aan garabkiisa joogay tan iyo markii uu galay waqtigiisa ugu wanaagsan.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu yidhi: “Dhaawacyo dhawr ah ayaa soo gaadhay, garabkayga ayaanu joogtay xilligii aan waqiga madow ku jiray ee aan dhaawaca ahaa.”
Saaxiibtinimada labadan ciyaartoy waxay ahayd mid qoto dheer oo ay mararka qaarkood hal baabuur wada raaci jireen, laakiin waqtigoodii Anfield iyo xulka qaranka Egland ay koox wadaagta ku ahaayeen labadiiba way soo dhamaadeen, sababtoo ah Adam Lallana waqtigan way uga dhamaatay xulka halka Anfield oo ay wada joogeenna uu toddobaadkan ka baxayo.
Lallana waxay wararku sheegayaan in uu ku biiri doono kooxda Brighton & Hove Albion inkasta oo aan wali si dhab ah loo caddaynin.